Maamulka gobalka Hiiraan oo kala shakiyay iyaga oo difaac kala galay sababo laxariira Hub baqaar lagu ogaa oo la waayay. |
Maamulka gobalka Hiiraan oo kala shakiyay iyaga oo difaac kala galay sababo laxariira Hub baqaar lagu ogaa oo la waayay.
Wararaka laga helaayo magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa sheegaya in isfaham darro tii ugu weyned ay soo kala dhex gashay maamulka gobalka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya kadib hub ay dowaldu laheyd oo lawaayay meel uu ka baxay.
Hubkaan oo ku jiray bakhaar looguna tala galay in lagula dagaalamo kooxda Shabaab ayaa wararku waxa ay xaqiijinayaan in mar qura lawaayay iyada oo lagu tuhmayo in xubna katirsan maamulka ay si qarsoodi ah uga iibsadeen Shabaabka Hiiran ka dagaalama.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in kooxda lagu tuhunsanyahay in ay hubkaan si aagr ah u iibsdeen xabsi guri ay yihiin xilligaan baaritaan dheeraad ahna uu socdo si arinta meel loogu saleeyo.
Weynta Hubkaan ayaa waxa ay imaaneysa iyada oo bishii lasoo dhaafay hub ladoonayay in si qarsoodi ah looga bixiyo madaxtooyada laqabtay, waxaana arintaani ay walaac gelin kartaa sida Soomaaliya ay xilligaan ugu guuleysan karto mudada sanadka ah ee lagu tijaabiyay qaabka ay hubka u xadidi karto oo hadii cabsidii laga qabay ay wax kasoo baxaan lagu celinayo cunaqabateyntii hubka.